China Mens na-agba ọsọ mma uwe ogologo uwe mgbatị egwuregwu na-aga ngwa ngwa ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Ruisheng
Mens na-agba ọsọ ahụike uwe ogologo uwe mgbatị egwuregwu na-adabara ngwa ngwa
Ndị ikom na-agba ọsọ akwa anyị na-emepụta nwere ike iweta ahụmịhe egwuregwu ka mma. Anyị nwere akụrụngwa maka ịmepụta ọkachamara iji hụ na uwe ahụ dị mma. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhazi ụdị uwe, logo, wdg, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị ma anyị ga-enye gị ọnụahịa kachasị mma.
Number Model akwa akwa
Ihe Polyester / Cotton \_ Nhazi, Ihe a choro
1.Ajuju obula na ajuju ka aga aza n’ime awa iri abuo na ano.
2.Quality tinyere ihe eji ebu ihe bu ihe kacha mma ma kwụsie ike.
3. Uwe anyị mepụtara nwere ike ịsụgharị ọsọ ọsọ, iku ume ma nwee ahụ iru ala
4. Nabata ụdị omenala, akara nkeonwe, akara ngosi na mbukota!
Mn June 2018, ụlọ ọrụ ahụ gafere akara asambodo mba BSCI nke mba ụwa. Anyị nwere onwe anyị 2 ụlọ mmepụta ihe na Huai'an, onye a na-akpọ RuZhen pụrụ iche na T-Shit, Polo, Ogologo ọkpa, nịịka, Sportwear, jaket, mkpuchi, ọzọ na-akpọ Haolv ọkachamara na-ehi ụra Set, Quilt, Ohiri Isi, Matara, Dechọ Mma.
Ndị mmekọ anyị na-ekpuchi ụdị 400 na mba 30 n'ụwa niile iji merie ntụkwasị obi nke ndị ahịa niile nwere oke mma, ma nwee
nwetara otuto dị elu site n'aka ndị ahịa ebe ọ bụ na e debere ya. Companylọ ọrụ ahụ nwere echiche ọrụ ahụ na “Ogo na-egosi Ike, Nkọwapụta Inwe Ihe ccessga nke Ọma”, ma na-agba mbọ ime nke ọma na akụkụ ọ bụla site na ntanetị nke ọ bụla, usoro nke usoro iji mepụta nyocha ikpeazụ, mbubata na mbupu. Anyị na-ekwusi ike na ụkpụrụ nke mmepe nke "Elu ọma, arụmọrụ, Eincerity na Down n'ụwa na-arụ ọrụ ụzọ" iji nye gị ezigbo ọrụ nhazi! Anyị ji obi anyị niile nabata gị ịbịa leta ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị maka imekọrịta!
Nke gara aga: Akwa mpe akwa Polo Shirt Uniform Polo embroidery School Badge Polo T-Shirt
Osote: Summer Mens Shot-sleeved Pajamas High Quality New 100% Cotton Comfortable Men Sleepwear Setịpụrụ
Mens Yoga Uwe Tummy Control High Waisted Wo ...
Chọpụta jaketị Mens Cotton na Best S ...